Clocaenog တောအုပ်တွင်းက လူသား - ဝီကီပီးဒီးယား
"Clocaenog တောအုပ်တွင်းက လူသား" ဆိုသည်မှာ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာတွင် ဝေလနယ် ၊ ဒန်ဘစ်ရှီးယား (Denbighshire) ရှိ Clocaenog တောအုပ်အတွင်းမှ တွေ့ရှိရသော အမည်မဖော်နိုင်သည့် လူသတ်မှု၏သားကောင်ဖြစ်သည်။ အနှစ် ၂၀ ကြာသည့်တိုင် အလောင်းအား တွေ့ရှိသူမရှိခဲ့ပေ။ မြောက်ပိုင်းဝေလနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၊ နိုင်ငံအနှံ့ အကူအညီတောင်းခံမှု နှင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ကွင်းဆက်လူသတ်သမား တဦးထံမှ အချက်အလက်များ ရှိသော်လည်း အလောင်းမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့် လူသတ်သမား(များ) မှာ ပဟေဠိဖြစ်နေဆဲပင်။
၁ အလောင်းအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း
၃ သားကောင်၏ အချက်အလက်
၄ နောက်ဆက်တွဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ
အန်ဒရူးနှင့် မာ့ခ် မစ်ဒယ်လ် ညီအကို ၂ ဦးက ၂၀၁၅ ဝေလပြည်နယ်စီတန်းလှည့်လည်ပွဲ ဂျီဘီ အား ပွဲကြည့်ရန် Cloceanog တောအုပ်အတွင်းစခန်းချနေကြစဉ် ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ၌ ကြွင်းကျန်ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။။ ညအမှောင်ထုအောက်တွင် မာ့ခ်က မီးတိုင်သုံးပြီး တောအုပ်တွင်း၌ ထင်း ရှာနေခိုက် တောအုပ်ကြမ်းပြင် ထက်မှ အရိုးခေါင်းအား ဦးစွာတွေ့ရှိပြီး အနီးကပ်လေ့လာကြည့်သောအခါ လူ့အရိုးခေါင်းဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အရိုးခေါင်းတွင် ရေညှိများကပ်လျှက်ရှိပြီး ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ မြောက်ပိုင်းဝေလနယ် ရဲတပ်ဖွဲ့အား ၂၀း၃၅ အချိန်တွင် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ဒေသခံရဲအရာရှိ တဦးက အခင်းနေရာသို့ လာရောက်ပြီး အရိုးကျနေပြီဖြစ်သော အမျိုးသားတဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို ညီအကို ၂ ဦးက တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ကောက်ချက်ချ လိုက်သည်။
သစ်ပင်များကြီးထားနေမှု ၊ အလောင်း ယိုယွင်းပျက်စီးမှု ၊ အလောင်းတွေ့ရှိရာသစ်တောဧရိယာတဝိုက်အား ၁၉၈၅ တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သည်ဟူသော အချက်တို့အား ထောက်ရှုလျက် အလောင်းအား ၁၉၉၅ နှင့် ၂၀၀၅ နှစ်များအကြား စွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ယူဆသည်။
စီတန်းလှည့်လည်ရာ Clocaenog လမ်းဆုံ တခု နှင့် Pentre-llyn-Cymmer ၊ Llyn Brenig တို့အနီးတွင် ကြွင်းကျန်ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သစ်တောလမ်း ၂ ခုမှ မီတာအနည်းငယ်သာ ကွာဝေးရာ အလောင်းအားစွန့်ပစ်ရာနေရာကို အလွယ်တကူ သွားရောက်နိုင်သည်။ ကွင်းဆက်လူသတ်သမား ပီတာမော၏ အသက်အငယ်ဆုံးသားကောင် အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် အက်ဒွက်ကာသီအား သတ်ဖြတ် မြုပ်နှံရာ၏ အနီးတွင် ရှာဖွေတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အက်ဒွပ်ကာသီအား တွေ့ရှိခဲ့သည့် “နေရာတနေရာတည်းမှ” Clocaenog တောအုပ်တွင်းက လူသားကို တွေ့ခဲ့သည်ဟု နောက်ပိုင်းတွင် မော က ပြောဆိုသည်။
တွေ့ရှိပြီးနောက် ၅ ပတ်တိုင်တိုင် အကြီးစားရှာဖွေမှု တောအုပ်တွင်း ပြုခဲ့သည်။ အမျိုးသားတဦး၏ ခန္တာအရိုးစု အပြည့်အစုံနီးပါးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တွေ့ရှိသည်။ အရိုးခေါင်းတွေ့ရှိရာနေရာမှ မီတာအနည်းငယ်အကွာ သစ်ပင် အုံ့အုံ့ဆိုင်းဆိုင်း နှင့် ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းအောက်မှ တွေ့ရှိသည်။ ရောဂါဗေဒပညာရှင်က စစ်ဆေးနိုင်ရန် ရုပ်ကြွင်းကို တွေ့ရှိပြီး ၂ ရက် အကြာတွင် ဖယ်ရှားယူငင်သွားသည်။ အရိုးစုမှ ဒီအဲန်အေကောက်ကြောင်းကို ထုတ်ယူခဲ့သည်။ ယူကေနိုင်ငံတော်အဆင့် ဒီအဲန်အေမှတ်တမ်းပေါင်းချုပ် (ဒေတာဘေ့စ်) သို့မဟုတ် ယူကေ ပျောက်ဆုံးသူများဌာနတို့၌ ကိုက်ညီသည်ကို မတွေ့ခဲ့ရပေ။
ဇီဝဗေဒပညာရှင်များနှင့် မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာမနုဿဗေဒပညာရှင်များက အလောင်းကို ရက်သတ်မှတ်ရန် ခြုံနွယ်များမှ နမူနာနှင့် သက်သေအထောက်အထားများ ရယူခဲ့သည်။ ဦးခေါင်းအား တုံးသည့်လက်နက်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းဟု ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုက အဖြေထုတ်သည်။ ၂၀၀၄ နှင့် ၂၀၁၀ အကြား အတိအကျမသိသည့်နေရာတွင် အသတ်ခံရပြီးမှ အလောင်းကို ရှာတွေ့သည့်နေရာ၌ စွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ရဲများက အမှုတည်ဆောက်သည်။
၁၉၅၀ နှစ်များအတွင်း မွေးဖွားခဲ့ပုံပေါ်ပြီး သေဆုံးချိန်၌ အသက် ၅၄ နှစ် ကျော် ၆၀ နှစ်တွင်း ရှိပြီဖြစ်နိုင်သည်။ အရပ်အမောင်းကောင်းပုံပေါ်ကာ အရပ်အမြင့် ၅ ပေ ၈ လက်မ နှင့် ၁၀လက်မခွဲကြား (၁.၇၃ - ၁.၇၈ မီတာ) ရှိနိုင်သည်။ 
ကျောရိုးနှင့် အရိုးအဆက်များ (fused vertebrae) တို့တွင် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ နှာခေါင်းရိုးကျိူးပြီး ဘယ်ဘက် လက်ကောက်ဝတ်တွင် ဒဏ်ရာရခဲ့ဟန်ရှိသည်။ သူ့တွင် လေးဘက်နာရောဂါရှိရာ ကျောရိုးနှင့် အခြားအရိုးအဆစ်များ တွင် ယောင်ယမ်းမှုရှိခဲ့သည်။ နာကျင်မှု ခံစားခဲ့ရပြီး သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်မှု နည်းပါးသွားခဲ့ဟန်ရှိသည်။
သွားအနည်းငယ် ပျက်စီးသွားသောကြောင့် ပါးပြင်ချိုင့်ဝင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး နောက်အံသွား အားလုံး မရှိတော့သဖြင့် ငယ်စဉ်က သွားကျန်းမာရေး အသိမရှိခဲ့ပုံပေါ်သည်။ နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ခံယူခဲ့သော အရည်အသွေးမြင့် သွားပြုပြင်မှုများကြောင့် အနေအထား ရုတ်ချည်းခြားနားသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်းအမျိုးသား၏ ဘဝသက်တမ်း တလျောက်တွင် ထင်သာမြင်သာရှိသည့် သွားပြုပြင်ခြင်း ၂ ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ်မှာ ရှေ့သွားများအား အံစွပ်စွပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ၁၉၈၀ နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အကြား ယူကေ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ ပုံပေါ်သည်။ ဒုတိယတခုမှာ ရှားပါးသည့်ပြုပြင်မှုဖြစ်ပြီး ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသော ယာယီပလတ်စတစ်အံစွပ် အား ကုစားသည့်အနေဖြင့် ပြန်ဖာခြင်း ဖြစ်သည်။ သွားပြုပြင်မှုမှာ သိသိသာသာကွဲပြားပြီး အထူးကုလက်ရာြဖစ်သဖြင့် သွားဆရာဝန်အား ဖော်ထုတ်စေနိုင်မည် ဟု သွားဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သွားရောဂါဆိုင်ရာ မှုခင်းဆေးပညာရှင် ဂျွန်ရိုစီက ဆိုသည်။ သားကောင်၏ သွားပြုပြင်မှု လက်ရာများကို သွားဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်များ၌ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထည့်သွင်းဖြန့်ချိခဲ့သည်။
အလောင်းအနီးတဝိုက်တွင် အဝတ်အစားအချို့တွေ့ရသော်လည်း သားကောင်နှင့် ဆက်နွယ်မှု ရှိမရှိ အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ၂၀၀၀ နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်အကြား ထုတ်လုပ်သော Pringle အမှတ်တံဆိပ် အစိမ်းပုပ်ရောင် ဆွယ်တာအင်္ကျီ နှင့် ပျက်စီးနေပြီဖြစ်သော Marks and Spencer အမျိုးအစား အတွင်းခံ အနီရဲရဲဖြစ်ပြီး အတွင်းခံမှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ထုတ် ဖြစ်သည်။
သွားဆရာဝန်များက သူတို့၏ လက်ရာများအား မှတ်မိပြီး သားကောင်အား ဖော်ထုတ်နိုင်စေရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ၂၀၁၆ ဂျွန်တွင် သားကောင်၏ မေးရိုးဓာတ်ပုံ တပုံကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မိသားစုမျိုးရိုး ဒီအဲန်အေ သုတေသနကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကိုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ကြေငြာခဲ့သည်။
ယင်းအမျိုးသား အသက်ရှင်ခဲ့ပါလျှင် အသက် ၅၀ ၊ ၆၀ နှင့် ၇၀ အရွယ်များတွင် ရုပ်သဏ္ဌာန်မည်ကဲ့သို့ ရှိနေနိုင်မည် ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က BBC Crimewatch အစီအစဉ်၌ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၆ တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။
Clocaenog တောအုပ် လူသား၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား သိရှိကြောင်း ကွင်းဆက်လူသတ်သမား ပီတာမော က ဆက်သွယ်သတင်းပေးသဖြင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ၂၀၁၇ မတ်လတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားသော Aberystwyth တက္ကသိုလ်မှ အရွယ်ရောက်ပြီးကျောင်းသား တဦးဖြစ်ကြောင်း စာထဲတွင် မောက ရေးသားထားသည်။ သားကောင်၏ အမည်ကို မော က ထုတ်ဖော်ပြောခြင်းမရှိသော်လည်း Aberystwyth တက္ကသိုလ်၌ ပထမနှစ်တက်ရောက်နေစဉ် ၁၉၉၆ ဇန်နဝါရီ ၁၆ တွင် ပျောက်ဆုံးသွားသော စတုခ်အွန်ထရန့် အနီးရှိ ဘရက်ဒလေမှ ရော်ဂျာအီဗန်စ် ဟု အမည်ရသူတဦးဖြစ်ကြောင်း ဒေးလီးပို့စ်သတင်းစာမှ ဂျာနယ်လစ်များက ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ နေ့စွဲများ ဝိရောဓိဖြစ်နေခြင်းကြောင့် သူ၏သီအိုရီအား ရဲတပ်ဖွဲ့က မယုံကြည်ဟု မောက နောက်ပိုင်းတွင် ပြောခဲ့သည်။
၂၀၁၇ အောက်တိုဘာတွင် 2017 Wales Rally GB သို့တက်ရောက်သူများအား ရဲတပ်ဖွဲ့အကူအရာရှိများနှင့် race မာရှယ် များက လက်ကမ်းစာစောင်များ ပေးဝေခဲ့သည်။
↑ Williams၊ Kelly။ "Cerrigydrudion forest murder body police given potential names of victim"၊ northwales၊ 2016-09-27။
↑ Hodgson၊ Sarah။ "This is the face of the man found dead in Clocaenog forest at Cerrigydrudion"၊ northwales၊ 2016-09-26။
↑ North Wales Police (27 October 2017)။ Appeal on second anniversary of the discovery of human remains။
↑ Crump၊ Eryl။ "'Murder' mystery detectives release picture of man's jawbone"၊ mirror၊ 2016-06-07။
↑ Crimewatch 26/09/2016 10m05s
↑ Crimewatch 26/09/2016 03m30s
↑ Vine, Jeremy (26 September 2016). 26/09/2016. Crimewatch. 11m15s minutes in. Retrieved 16 September 2018.
↑ Mears၊ Tyler။ "Human remains found in woods where notorious serial killer left victim"၊ walesonline၊ 2015-12-07။
↑ Bagnall၊ Steve။ "Does Killer Peter Moore know identity of Clocaenog Forest murder victim?"၊ northwales၊ 2017-03-06။
↑ Case 15-006991 (in en)။
↑ Crimewatch 26/09/2016 10m30s
↑ Williams၊ Kelly။ "Police continue to follow up 60 calls in Cerrigydrudion forest body murder case"၊ northwales၊ 2016-10-20။
↑ Staff။ "Appeal to rally fans over murdered man" (in en-GB)၊ BBC News၊ 27 October 2018။
↑ Staff။ "Crimewatch appeal over body in forest" (in en-GB)၊ BBC News၊ 2016-09-26။
↑ Crimewatch 26/09/16 5m00s
↑ Crimewatch 26/09/2016 5m20s
↑ Crimewatch 26/09/2016 6m00s
↑ Staff။ Police reveal new clues in pursuit to name body discovered in Clocaenog Forest (in en)။
↑ Crimewatch 26/09/2016 6m30s
↑ Staff။ "Police in north Wales still trying to identifyaskeleton found six months ago" (in en)၊ ITV News။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Clocaenog_တောအုပ်တွင်းက_လူသား&oldid=494802" မှ ရယူရန်
မဖော်ထုတ်နိုင်သေးသော လူသတ်မှု၏ သားကောင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၅:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။